“UN Special Rapporteur Ms. Yanghee Lee isaProstitute” declared by Wirathu, the monk supported by President Thein Sein | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The Deen Show JESUS V MUHAMMAD!! MUSLIM RESPONSE
အရှင်နာဂသေန (မဘသ) အဖွဲ့ထဲသုို့ မ၀င်ရခြင်းအကြောင်းရင်း »
“UN Special Rapporteur Ms. Yanghee Lee isaProstitute” declared by Wirathu, the monk supported by President Thein Sein
“UN Special Rapporteur Ms. Yanghee Lee isaProstitute” declared by Wirathu, the monk supported or protected by President Thein Sein as the son of Buddha when Wirathu was labelled as The Face Of Buddhist Terror by TIMES magazine.
Wirathu, The Face Of Buddhist Terror, Calls UN Special Rapporteur Ms. Yanghee Lee A Prostitute
Yangon – United Nations Special Rapporteur on the situation of Human Rights in Myanmar, Ms. Yanghee Lee recently visited Myanmar for 10 days and left on January 16, 2015.
An extremist monk, U Wirathu, who is well known to the world as Burmese Bin-Laden, organizedaprotest against Ms. Yanghee Lee’s fact-finding mission on January 16th in the afternoon. The protest took place at Kyae Thun Pagoda, on the east side of Shwedagon Pagoda, Bahan Township in Yangon. In the protest there wereafew anti-Muslim monks led by U Pamaukkha and anti-Muslim activists led by Nay Myo Wai. There was alsoaBurmese pro-democracy activist from the United Kingdom, Sindi Thin Mar Oo, who joined as guest speaker, according toapost on Wirathu’s official Facebook.
In his Facebook post, he worte “The public remarked that my [Wirathu] speeches were most severe, roughest and toughest amongst all of the speeches [given on that day].
Those who create [activate] Rohingyas are our enemy.
Those who support Rohingyas are our enemy.
Those who propose Rohingyas are our enemy.
Those who discuss and support Rohingyas are our enemy.”
He added very rudely that “Mrs. Yanghee Lee, you may beabig shot in UN but for our country, [we regarded that] your standard is just ofaprostitute. If you like, you could give your ass to Kalars but we could not give our country to Kalars. Ban Ki-moon, you are [just] an Asian like us; don’t be arrogant on us as we are both Asians.”
Wira Thu added 35 new photos.
“ရိုဟင်ဂျာတောထုတ် ကုလားသမဂ္ဂကို ရှုတ်ချတဲ့ပွဲလေးပါ”
16.1.2015 မွန်းလွဲ 1:30 နာရီ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတိဂုံအရှေ့မုခ်၊ ကြေးသွန်းဘုရားမှ စတင်ချီတက်ရာမှာ နောင်တော်ကြီးဦးပါမောက္ခလည်း ပါပါတယ်။
ဟောပြောသူတွေကတော့ ရဟန်းတော်များရော၊ အမျိုးသားများရော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရော ပါပါတယ်။
ဦးပါမောက္ခ၊ ဦးနာယက၊ ဦးသုစိတ္တ၊ နောင်တော်လေး၊ ဝင်းကိုကိုလတ်၊ ဦးနေမျိုးဝေတို့အပြင် အင်္ဂလန်မှ အလည်ပြန်လာတဲ့ မစန္ဒီသင်းမာဦးလည်း တက်ရောက်ဟောပြောပါတယ်။
စာရေးသူမိန့်ခွန်းတွေကိုတော့ အပြင်းထန်ဆုံး အကြမ်းတမ်းဆုံး စကားလုံးများအဖြစ် ပြောစမှတ်ပြုကြတာ တွေ့ရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကို အသက်သွင်းသူ ဒို့ရန်သူ။
ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံသူ ဒို့ရန်သူ။
ရိုဟင်ဂျာကို အဆိုပြုသူ ဒို့ရန်သူ။
ရိုဟင်ဂျာကို ထောက်ခံဆွေးနွေးသူ ဒို့ရန်သူ။
မစ္စက်ရန်ဟီးလီ မင်းဟာ ကုလားသမဂ္ဂမှာ ဆရာကြီးဖြစ်ပေမယ့် ဒို့နိုင်ငံအတွက်တော့ ဖာသည်မအဆင့်ပဲ ရှိပါတယ်ကွာ။
မင်းကြိုက်လို့ ကုလားကို မင်းဖင်ပေးချင်ပေးပါ။
ငါ့နိုင်ငံကိုတော့ ကုလားလက်ထဲ မအပ်နိုင်ဘူးကွ။
မစ္စတာဘန်ကီမွန်း ခင်ဗျားလည်း အာရှသား၊ ကျုပ်တို့လည်း အာရှသားပါပဲ။
This entry was posted on January 19, 2015 at 4:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to ““UN Special Rapporteur Ms. Yanghee Lee isaProstitute” declared by Wirathu, the monk supported by President Thein Sein”
January 19, 2015 at 5:28 am | Reply
Min Anwar Geo
Soe Min with မိုး ကြိုး and 34 others
January 17 at 12:17am ·
ဝီရသူက်ို ကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင် မဖစ်နဲ့
မန္တလေး ရီရှင်းစီးပွားရေး လုပ်ငန်းက ယူနန်တရုပ် ၊ ၈၃ လမ်း ၃၀-၃၁ လမ်းကြား ဝင်းမြင့် စက်မှုမှ ဖူကျင့်ကွမ်းရင် ဘုရားကျောင်းဂေါပက ၊
၈၁ လမ်း ALBA နာရီဆိုင်မှာ ကွမ်တုံတရုပ် ၊ ဝိန့်စိန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ၊
ယူနီဗာစ်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်နှင့် တရုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ မှ မန်းလေး မဘသ အား အလှူငွေ သိန်းငါးထောင်ကျပ် လှူဒါန်းပြီး ၊ မိမိတို့သည် တရုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ မညှိုးနွမ်း မပျောက်ပျက်အောင် အတူတကွ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ တာဝန်ရှိကြောင်း ၊
မန်းမဘသနှင့် အရှင်ဝီရသူ ၏ ဦးဆောင်မှု နောက်မှ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ကူညီထောက်ပံ့ လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီနှင့် မဘသ ဆရာတော်ကြီးများ၏ စေတနာနှင့် အနစ်နာခံဆောင်ရွက်မှု များကိုမျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ရှိပြီး ဖြစ်သဖြင့် လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲကာလတွင် မဘသဆရာတော်ကြီးများ၏ သြဝါဒကိုလိုက်နာ၍ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီအား မဲပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကို တရုပ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းမှ ရှိခိုးဦးချ လျှောက်တင်ခဲ့ပါတယ်၊၊
အရှင်ဝီရသူ က ဒကာတို့ အနေနဲ့ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုသာအပြည့်အဝထောက်ခံဖို့ လိုကြောင်း ၊ ဒကာတို့ လူမျိုးများ မန်းလေးမြို့လည်ခေါင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာ များပြားလာတာကို ကြိုဆိုပါကြောင်း ၊ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့လူမျိုးက ပိုပြီးအောင်မြင် တိုးတက်မှာ ဖြစ်လို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ မြို့သစ်မြို့ပြင် တွေဘက်ရောက်ရှိသွားခြင်းဟာ ပျင်းရိညံ့ဖျင်းခြင်းရဲ့ ပြယုဒ်တစ်ခုအဖြစ်သာ မှတ်ယူ ပြီး သံဝေဂ ရယူနိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊
မဘသ တရားပွဲ စာရွက်စာတမ်း အထွေထွေကုန်ကြစရိတ် စတဲ့ လိုအပ်တဲ့ငွေတွေ ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းပေးလို့ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိကြောင်း နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အောင်နိုင်ရေး အတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ ဖို့လိုကြောင်း ပြန်လည်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်
၄င်းနောက် တရုပ် မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် ဝင်းမြင့် စက်မှုအား ဦးဆောင်စေလျှက် လမ်း ၃၀ လမ်း ဘုရားအတွင်း ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ်ထုကို တည်ထားကိုးကွယ်စေဖို့ အမိန့်ရှိထားကြောင်း အရှင်ဝီရသူမှ မိန့်ကြားထားကြောင်း ရုပ်ထုအား လမ်းလည် ဘုရားအတွင်း တည်ထားကိုးကွယ်ပြီးကြောင်း သိရသည်